Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 2t l0613 tal
Salamo nataon'i Jonà
Talata 07 May
Rehefa natsipy tany anaty ranomasina i Jônà dia nisy trondro lehibe nitelina azy, noho ny fandaharan’Andriamanitra. Mety nieritreritra i Jônà fa ny fahafatesana no fomba tokana hialany amin’ny iraka nampanaovina azy handeha ho any Ninive. Fitaovana hamonjena ity mpaminany ity anefa ilay trondro lehibe (tsy antsoina hoe trozona izany ato anatin’ny boky). Tsy tahaka an’i Jônà ity trondro ity fa nanoina teo no ho eo ihany izy ary nankatò avy hatrany ny baikon’Andriamanitra (Jônà 1:17; 2:10).
Niasa tamin’ny fomba mahagaga teto ny fahasoavan’ Andriamanitra ary na dia manesoeso aza ny olona sasany rehefa mandre ity tantara ity, i Jesôsy kosa dia nilaza marimarina fa tantara marina izany (Mat. 12:40) ary nampiasainy mihitsy aza izany ho tandindon’ny fahafatesany sy ny fitsanganany amin’ny maty.
Vakio ny Jônà 2, izay antsoina matetika hoe salamo nataon’i Jônà. Inona no resahin’i Jônà eto? Inona no zavatra nianarany? Inona ireo fitsipika ara-panahy azontsika ianarana avy amin’ity toko ity?
Mankalaza ny fanavotan’ Andriamanitra avy tamin’ny ranomasina lalina mampidi-doza ny salamon’i Jônà. Ity ihany no fizaràna miendrika tonon-kira ato amin’ny bokiny. Ampahatsiahiviny ao ny vavaka fitarainana nangatahany vonjy raha nilentika tany anaty ranomasina lalina sy niatrika fahafatesana azo antoka izy. Tsapany ta nteraka ny famonjena azy ka nisaotra an’ Andriamanitra izy noho izany famonjena izany. Maneho amintsika ity tonon-kira ity fa mahazatra an’i Jônà ireo salamo fiderana sy fisaorana ao amin’ny Baiboly.
Ampoizina fa niompana tamin’ny fanati-pisaorana ny voady nataon’i Jônà. Feno fisaorana izy satria fahafatesana no mendrika azy kanefa famindrampo mahagaga no nasehon’ Andriamanitra taminy. Na dia tsy nankatò ny baikon’ Andriamanitra aza i Jônà, dia mbola nihevitra ny tenany ho nahatoky tamin’ Andriamanitra ihany izy satria tsy mba voasariky ny fivavahana tamin’ny sampy. Tapa-kevitra ny hanatanteraka ny iraka nampanaovina azy sy ny ho mahatoky amin’ny fiantsoana azy izy na dia teo aza ny tsy fahatanterahan’ny toetrany.
Indraindray dia mila mandalo fanandramana mangidy isika izay vao misokatra amin’ny Tompo ny fontsika, izay isika vao mahatsapa fa Izy irery ihany no fanantenana sy famonjena antsika. Eritrereto ny fanandramana niainanao ka nahitanao mazava tsara ny tanan’ Andriamanitra niasa teo amin’ny fiainanao. Nahoana no mora dia mora tokoa ho antsika ny manadino ny fomba nitantanan’ Andriamanitra ny fiainantsika, eny fa mety tamin’ny fomba mahagaga mihitsy aza izany, indrindra rehefa misy fitsapana hafa miseho eo amin’ny fiainantsika?